Olee otú iji weghachi Android ekwentị site backups effortlessly
1 ndabere iPhone
Ndabere iPhone Ozi
Ndabere iPhone Notes
Ndabere iPhone Photos
Ndabere iPhone Ndi ana-akpo
Ndabere iPhone ka Mac
Ndabere iPhone ka PC
Ndabere iPod Music
Nyefee Music ka iPhone
iPhone ndabere softwares
Weghachi iTunes ndabere
iTunes ndabere extractor
iPhone ndabere Paswọdu
iTunes ndabere Issues
iTunes ndabere Atụmatụ
iCloud ndabere Atụmatụ
2 ndabere Android
Ndabere Android Ndi ana-akpo
Ndabere Android SMS
Ndabere Android App Data
Ndabere Verizon ekwentị mkpanaaka na
Wepụ Android ndabere
Weghachi Android ndabere
3 ndabere Blackberry
Ndabere Blackberry Ndi ana-akpo
Ndabere Blackberry SMS
Blackberry ndabere extractor
4 ndabere ekwentị
Ndabere Windows Phone
Ndabere Akwụkwọ ndekọ aha ọtụtụ
Ndabere Google Photos
Ndi ana-akpo ndabere Solutions
Nchekwa onwe-ndabere ekwentị Photos
Ndabere na ekwentị Ígwé ojii
Ekwentị ndabere Solutions
Ekwentị ndabere Mere
Google syncs ukwuu na Android ngwaọrụ. Na oge, mgbe ị na n'amaghị ama ehichapụ ihe si gị gam akporo ngwaọrụ, Google mmekọrịta-azọpụta gị si ọtụtụ nsogbu. Bụrụ na nke ọdachi mgbe dum data ọkọdọ kpochapụrụ si ngwaọrụ, luckily, Google-eme ụfọdụ backups na ebe. Ndị a backups enye oké echiche nke nche bụrụ na ihe anaghị aga-ezighị ezi na ngwaọrụ gị data.
Ka ịghọta otú ị nwere ike iweghachi ihe Android ekwentị site backups effortlessly iji Google nkwado ndabere na mpaghara ihe kacha ngwa dị na ahịa akpọ Wondershare MobileTrans.
Ndabere ngwaọrụ gị data iji Android ndabere Service:
Ị nwere ike ndabere photos, videos, music na faịlụ na ngwaọrụ gị eji gị Google akaụntụ. Android ndabere Service nwere ike iji na nkwado ndabere na mpaghara data jikọọ otu ma ọ bụ karịa Google akaụntụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji dochie ngwaọrụ gị ma ọ ihichapu ya ẹdude data, ị nwere ike iweghachi gị data eji ihe ọ bụla na akaụntụ ebe ị kwadoo gị data.
Nzọụkwụ ndabere gị data iji Android ndabere Service:
1. Mbụ niile, na-emeghe ngwaọrụ gị Ntọala menu.
2. Ugbu a, N'okpuru "Personal," enweta na ndabere & tọgharịa.
3. Họrọ igbe dị n'akụkụ "ndabere m data."
Ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu Google Akaụntụ na ngwaọrụ gị: Kpatụ ndabere akaụntụ ma họrọ na akaụntụ ị chọrọ ka dị ka gị ndabere akaụntụ na ọ bụrụ na ị dịghị ama nwere ndabere akaụntụ na ngwaọrụ gị, enweta ndabere akaụntụ ịgbakwunye a akaụntụ ọhụrụ .
Akpaghị aka weghachi ngwa ntọala
Mgbe ị na-reinstall ihe ngwa na ngwaọrụ gị, ị nwere ike họrọ nhọrọ iji weghachi ngwa ntọala. Nke a na atụmatụ nwere tupu ọnọdụ na i tinyeworị kwadoo gị data na gị Google na akaụntụ, na ngwa ị na-aga re-wụnye na-eji nkwado ndabere na mpaghara ọrụ. Ụfọdụ ngwa nwere ike ghara nkwado ndabere na mpaghara weghachite niile data.
Nzọụkwụ iji weghachi ngwa ntọala na ngwaọrụ gị
1. Open ngwaọrụ gị Ntọala menu.
2. N'okpuru "Personal," mgbata ndabere & weghachi.
3. Lelee igbe dị n'akụkụ "Automatic weghachi."
Iweghachi data na ntọala site na iji Android ndabere Service:
Android ndabere Service ike ga-eji iweghachi gị data on a ngwaọrụ ọhụrụ ma weghachi ngwa ntọala ozugbo ị kwadoo gị data gị Google akaụntụ. Mgbe ị na tinye gị Google akaụntụ a ngwaọrụ ọhụrụ, data na ị na mbụ kwadoo na Google akaụntụ Nwela weghachiri ngwaọrụ ọhụrụ.
Gịnị data na ntọala na-weghachiri eweghachi.
Google Kalinda ntọala
Wi-Fi netwọk & okwuntughe
Home ihuenyo na akwụkwọ ahụ aja
Ngwa arụnyere na site Google Play
Asụsụ & Input ntọala
Ụbọchị & Time
-Atọ ndị ọzọ ngwa ntọala & data
Nkwado ndabere na mpaghara weghachite Na Wondershare MobileTrans
Wondershare MobileTrans Bụ otu nkwụsị ngwọta maka mkpanaaka gị transfer na nkwado ndabere chọrọ. Ọ nwere ike na nyefee kọntaktị, oku na ndekọ, mgbasa ozi faịlụ, na ndị ọzọ gafee multiple mobile sistem. Ọ bụghị naanị na transfer ma ọ pụkwara ndabere gị smartphone data na kọmputa gị. Ọ bụ inweta, fully- ọtọ na-akwado ndị niile isi mobile sistem ma e wezụga Windows Mobile. Ya mere, gị data transfer na nkwado ndabere mkpa bụ ndị dị mfe ga-emezu na nke a software.
Nyefee ọdịnaya n'etiti Android, iDevice, WinPhone na Nokia (Symbian) na 1 Pịa.
Nyefee na kasị kọntaktị, foto, ozi, music, video, ngwa, kalenda, na oku na ndekọ.
Ndabere Android, iDevice, WinPhone na Nokia (Symbian) ekwentị data na kọmputa.
Wepụ backups kere site MobileTrans, iTunes, Samsung Kies, BlackBerry® Desktọpụ Suite na ndị ọzọ na nyefee ekwentị gị.
Akwado iche iche netwọk, dị ka AT & T, Sprint, Verizon, T-Mobile.
Nkwado 3000+ igwe na-agba ọsọ Android, Nokia (Symbian) na iOS.
4.998.239 ndị ebudatara ya
Nyefee oku na ndekọ, ederede ozi, ngwa, music, foto na vidiyo na, ọ bụghị naanị na kọntaktị.
Wondershare MobileTrans Ihe ize ndụ-free ngwa nke na-mbụ àgwà nke data emebibeghị.
Data transfer na otu click.
Nyefee nke data enweghị ihe ọ bụla egwu data a na-efu.
Kpamkpam free nke ọ bụla n'ihe ize ndụ.
Ịnwere ike ịnyefe niile ị ọdịnaya n'etiti akwado igwe na netwọk ọ bụla na-enweghị hassle.
Wondershare MobileTrans Bụ gị kacha enyi mgbe ọ na-abịa na-akpụ akpụ data site na otu ekwentị gaa na ekwentị ọzọ na otu netwọk. I nwekwara ike akwagakwa si ​​dị iche iche netwọk na na-na data na ekwentị gị. I nwekwara ike gbanwee data si nkwekọrịta igwe na-abụghị nkwekọrịta igwe mfe.
Nokia Symbian: Symbian 40 & Symbian 60 & Symbian ^ 3
WinPhone: Windows 8 / 8.1
Android: si gam akporo 2.1 ka Android 5.0
iOS: iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 7.1, iOS 8 & iOS 8.1
Blackberry: OS 10.3.1 / 10.3.0 / 10.2.1 / 10.2.0 / 7,1 / 7.0 (Akwado ndabere faịlụ nke Blackberry igwe na-agba ọsọ OS 10.3.1 / 10.3.0 / 10.2.1 / 10.2.0 / 7,1 / 7.0, nke na-kere BlackBerry® Link)
Akwado ụdị faịlụ
Kọntaktị, ozi, Kalinda, Photos, Music, Video, oku na ndekọ, égwu
Nzọụkwụ na nkwado ndabere na mpaghara Android Devices
Nzọụkwụ 1: Jikọọ gị Devices na kọmputa, na-agba ọsọ Wondershare MobileTrans, na pịa Malite ịbanye ekwentị na ekwentị transfer window. Jikọọ gị ngwaọrụ abụọ (Android, Symbian ma ọ bụ iOS ngwaọrụ) gị na kọmputa na USB cables. Mgbe gị na ngwaọrụ na-ejikọrọ na achọpụtara site MobileTrans. Pịa na Back Up ekwentị gị.
Nzọụkwụ 2: Họrọ faịlụ na ụdị mkpa ka ị ndabere, na pịa Malite Copy. Usoro ihe omume ga-enyere gị aka ndabere nile data na ị họrọ na kọmputa.
Nzọụkwụ na Weghachi Data gaa na ekwentị ọzọ
Nzọụkwụ 1: Pịa na Weghachi si Backups na omume bụ isi interface. Mobiletrans pụrụ ịkwado backups site ọzọ mobile oru kwa, dị ka MobileGo, Samsung Kies, iCloud na iTunes, wdg Họrọ ndabere faịlụ ị ga-achọ iji weghachi site na listi.
Step2: Ugbu a, data si ndabere faịlụ na ike ga-agafere ga-edepụtara na window dị ka ozi kọntaktsị, foto wdg Ị nwere ike ịhọrọ data mkpa ka ị nyefee pịa Malite Detuo. The họrọ data ga-n'ụzọ zuru ezu depụtaghachiri ka gị ebe ekwentị.
Ọzọ Isiokwu Ị nwere ike amasị
Kpamkpam Hichapụ Android ekwentị mkpanaaka na
Hichapụ Android Remotely
3 Ụzọ ka uzo iCloud mkpọchi
Nyefee Android faịlụ n'elu WiFi
Nyefee Android Files na iji eriri USB
Weghachi si iCloud ndabere
Download iCloud Backups
Nyefee faịlụ site Android ka iPhone
Bugharịa Data si iPhone ka Android
Top 5 iTunes Ime ngwa ọdịnala n'ihi Android
Top 3 iTunes Alternatives maka Android
5 ngwọta na-ndabere Verizon gam akporo igwe
> Resource> Android Data Recovery> Olee otú iji weghachi Android ekwentị site Backups effortlessly